Soojiidashada - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
maxaa noo gaar ah
Wadada Xawaaraha ee Brownstown
Brownstown Speedway wuxuu ka furmay 1952 Wadada 250 Highway ee Dagmada Jackson County, oo hal mayl koonfur-bari ka xigta Brownstown. Jinsiyadaha waxaa lagu qabtaa Maarso illaa Oktoobar wadada rubuc mayl ee oval oval iyo [...]
Medora Daboolay Buundada
Buundada Daboolan ee Medora, oo uu dhisay 1875-kii dhise-dhise JJ Daniels, waa buundada ugu dheer ee daboolan saddexda taako ee Maraykanka. Waxay ku taal meel u dhow Medora oo ku taal Fork -ka Bari ee Wabiga Cad [...]
John Mellencamp ee la soo dhaafay waxaa si adag loogu beeray Seymour iyo County Jackson. Mellencamp wuxuu halkan ku dhashay Oktoobar 7, 1951. Qof ka badbaaday hore ee laf-dhabarka, Mellencamp wuxuu ku barbaaray Seymour oo uu ka qalin-jabiyay [...]
Wareegga Buundada Daboolan ee Indiana
Matxafka Airfield ee Freeman Army
Matxafka Township Pershing
Matxafku wuxuu ku yaal 4784 West State Road 58 oo ku taal Freetown, matxafku waa tallaabo dib loogu soo celiyo waqtigii taariikhyahannada hore ama kuwa hadda deggan. Halyeey iyo farshaxan milateri, sawirro iskuul iyo [...]
Matxafka Fort Vallonia
Vallonia iyo Driftwood Township waxay hodan ku tahay taariikhda waxayna ahayd degitaankii ugu horreeyay ee Degmada Jackson. Matxafka Fort Vallonia, oo ku yaal dhulkii hore ee qalcadda, oo la dhisay 1810, wuxuu caawiyaa [...]
Matxafka Daabacaadda ee Conner
Madxafka John H. iyo Thomas Conner ee Daabacaadda Qadiimiga ah waa dukaan daabacan oo shaqeynaya oo lagu daabaco xilliyadii 1800-meeyadii, kuna yaal salka Xarunta Koonfurta Indiana ee Farshaxanka. Martida ayaa [...]
Xarunta Taariikhda Degmada Jackson
Xarunta Taariikhda ee Degmada Jackson waxay ka kooban tahay Bulshada Taariikhda iyo Bulshada Abtirsiinta. Matxafka Taariikhiga ah wuxuu furanyahay 9ka subaxnimo ilaa 11ka subaxnimo ee Talaadada iyo Khamiista waxaana [...]
Bandhigga Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Jackson County waqtigeedii hore iyo imminka waxaa lagu xusaa bandhigga oo la furay bishii Maajo ee 2013 Xarunta Booqdayaasha ee Degmada Jackson. Meel wadne iyo taariikh leh oo dhan oo u gaar ah, dadka soo booqda waxaa lagu daaweeyaa [...]
Regal 8 Masraxa Filimada
Taariikhda Magaalada Seymour
Meedy W. Shields iyo xaaskiisa Eliza P. Shields ayaa iska diiwaan galiyay saxanka magaalada Seymour 27-kii Abriil, 1852. Magaalada markii hore waxaa la oran jiray Mules Crossing, laakiin markii dambe waxaa loogu magac daray sharafta bulshada [...]
Taariikhda Magaalada Brownstown - Ewing
Soojiidashada, Wadooyinka Taariikhda
Tareenka dhulka hoostiisa mara
Warshad Biraha Medora
Jackson Live & Xarunta Dhacdada
Jackson Live waa goobta cusub ee muusikada Seymour. Bandhigyada habeen kasta oo Sabti ah 7da fiidnimo iyadoo albaabadu furan yihiin 6:15 pm Tikidhadu waa $ 15 oo loogu talagalay dadka waaweyn, $ 5 da'da 5 illaa 12 iyo carruurta 5 iyo kuwa ka hooseeya [...]
Shieldstown daboolay Buundada
Soojiidashada, Buundooyin daboolan
Buundada Daboolida Shieldstown waxaa la dhisay 1876 waxaana loogu magacdaray warshada qoysku leeyahay oo ku taal tuulada isla markiiba dhow ee Shields. Waxay ku kacday $ 13,600 waana tusaale horaantii qarnigii 19aad alwaax [...]
Skyline Drive waxay ka tirsan tahay Kaymaha Gobolka Washington-Washington. Waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya Gobolka Jackson. Waxaa jira dhowr goobood oo daawasho ah oo ka yimaada joog sare iyo sidoo kale aag tamashleyn ah. [...]
Qaxootiga Duurjoogta ee Muscatatuck waxaa la aasaasay sanadkii 1966 si ay u noqoto magangal si ay u siiso aagag nasasho iyo quudinta ah ee shimbiraha inta lagu guda jiro socdaalkooda sanadlaha ah. Magangelintu waxay ku taal 7,724 acres. In [...]
Aagga Madadaalada Gobolka Hlow gaajo
Goobta Madadaalada ee Gobolka 'Starve-Hollow' waxay ka kooban tahay qiyaastii 280 hektar oo bixisa qaar ka mid ah kaamamka ugu fiican koonfurta Indiana. Waxaa laga xardhay 18,000-hektar Jackson-Washington State Forest waxaa [...]
Kaymaha-Washington State Forest waxay ku wareegsan yihiin ku dhowaad 18,000 hektar oo ku yaal gobollada Jackson iyo Washington ee bartamaha koonfurta Indiana. Kaymaha weyn iyo aagga xafiisku waxay ku yaalliin 2.5 koonfur-bari ee [...]
Pinnacle Peak waa bar raad raac ah oo ku taal Jackson-Washington State Forest oo bixisa aragtiyo cajiiba.
Cabsida Cabsida - Guriga ugu Caansan ee Indiana waa soo jiidasho sida kuwa kale. Waxaa la qabtaa dhammaadka toddobaadka xilliga dayrta, hoygani wuxuu bixiyaa xiisaha ugu wanaagsan ee xilli -ciyaareedka. Hoos ka daawo dhammaan [...]
Racin 'Mason Pizza Fun Zone waa meesha ugu fiican ee carruurta lagu kaxeeyo. Tag Karts, gawaarida xamuulka qaada, golfka yar yar ee cagaaran, ciyaaraha arcade, guryaha bouncy, cuntada iyo dhamaan baashaalka aad kari karto [...]